NATIONAL NEWS Archives - Page 37 of 37 - Nalapani
हरेक परदेशी नेपालीहरुको लागी खुसीको खबर – घर फर्कदा यस्ता समान ल्याउनुहोस छैन कुनै अबरोध
वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्कनेले एक सय ग्राम काँचो सुन लिएर आउन पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गर्दै एक सय ग्रामसम्म काँचो सुन लिएर आउन पाउने घोषणा गर्नुभएको हो । यसअघि सरकारले ५० ग्रामसम्म सुनका गहना मात्रै ल्याउन पाउने नियम थियो । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसको दायरा फराकिलो पार्दै १ सय ग्रामसम्मको काँचो सुन… Read More »
रविको झटारो – पेट्रोलको भाउ बढेर केहि भएन, दाल चामल नुन तेलको भाउ किन बढाएको ? ‘गरिब जनताको भागमा के पर्यो ?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । अर्थविदहरु, राजनीतिज्ञहरु र अन्य विज्ञ विद्धानहरुका माइक्रोस्कोप लागेको आँखाले बुझे जति हामी बुझ्दा पनि बुझ्दैनौ र आम सर्वसाधारण मानिसलाई चाहिने भन्दा बढी एक्सट्रा इन्र्फमेशनको काम पनि छैन । १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा जसलाई जे हेर्नुछ हेरुन् हामी चाही एउटै कुरा हेछौँ कि गरीब जनताको… Read More »
बजेट भाषणबाट आयो सुखद खबर – शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख ऋण
काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँ ऋण सरकारले दिने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज दरमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने उल्लेख गरेका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारले ३ अर्व १० करोड रुपैया बजेट छुट्टाएको छ। सार्वजनिक… Read More »
गगन भन्छन्- ढुंगेललाई आममाफी दिएर ओली सरकारले विधिको शासनको खिल्ली उडायो!
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिएर सरकारले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको बताएका छन् । उनले मंगलबार दिउँसो ट्विट गरेर अपराध स्वीकार नगरेर अदालतलाई चुनौती दिने ढुंगेललाई आममाफी दिएर सरकारले अदालतलाई हेपेको दावी गरेका छन् । यस्तो छ गगनको ट्विट गणतन्त्र दिवसमा ढुङ्गेल रिहा! गम्भिर फौजदारी अभियोगमा दण्डित व्यक्ति… Read More »